I-firmware yee-AirPods nayo iya kuba neendaba | Ndisuka mac
UToni Cortes | 07/06/2021 23:35 | Ezahlukeneyo
Inkcazo ye WWDC yalo nyaka. UTim Cook kunye neqela lakhe basibonisile iindaba ezizakufakwa kwiinguqulelo zesoftware kulo nyaka. Oku kuthetha ukuba ukuya kwinqanaba elikhulu okanye elincinci, zonke izixhobo zeApple ziya kuba nemisebenzi emitsha ngokukhawuleza xa zinokuhlaziywa.
Kwaye "konke" kubandakanya ne AirPods. Nje ukuba izixhobo zenkampani zihlaziyiwe, ii-headphone ze-Apple ziya kufumana amanqaku amatsha, ezinye zazo zinomdla kakhulu kubasebenzisi. Makhe sizibone.
Ii-AirPods azilityalwanga ngabafana baseCupertino, kwaye baya kufumana iindaba ezinomdla kwakamsinya nje ukuba yonke isoftware entsha yalo nyaka ikhutshwe ngokusemthethweni.
1 Ukunyusa incoko
3 Fumana ii-AirPods zam
4 Indawo yomsindo
Olu luphawu lokuqala lwe-AirPod Tim Cook neqela lakhe lisazise ngale njikalanga. Umsebenzi owenzelwe ukunceda abantu abaneengxaki zokuva kakuhle. Inqaku elitsha elisebenzisa iaudiyo yecomputer kunye ne-AirPods Pro eyakhelweyo kwimakrofoni yokuqaqambisa ukugxila kwisandi esifunyenweyo kumntu othetha phambi kwakho.
Unokukhetha ukunciphisa isixa se ingxolo yokuma kwenzeka ntoni ngakuwe. Ezi zinto zimbini zidibeneyo zinokuthintela ingxolo ejikeleze kwaye ziyonyuse kakhulu incoko yakho nomntu ophambi kwakho kwindawo enengxolo kakhulu.
USiri sele ekulumkisile kwizaziso ezintsha okwethutyana, kwaye ngoku kuzisa ukusebenza kwazo zonke izaziso kunye Yazisa ngezaziso. Ngoku ungaliguqula eli nqaku ukuze libhengeze kuphela ezona zaziso zakho zibalulekileyo kunye nexesha. Unokusebenzisa iZaziso ukukukhumbuza ukuba uthenge ntoni kwivenkile yokuthenga ukuba wenze izikhumbuzo ezithile kwindawo yokutya kwindawo yoKhumbuza usetyenziso.
Inqaku linokuthi lenzelwe ukubhengeza kuphela izaziso ezivela kwii -apps ozikhethileyo kwaye unokuvula ungaphazamisi ukuze uzicime ngokupheleleyo. UApple ukwathi ukuba usebenzisa inqaku elitsha Gxi ninisa eyahlula ubomi bakho bobuqu kunye nomsebenzi, ukhetho lwakho lwesaziso luya kuthathelwa ingqalelo ngokuzenzekelayo.
Fumana ii-AirPods zam
Uhlaziyo lwamva nje lwesoftware ka-Apple luyakuvumela ukuba ufumane eyakho I-AirPods Pro o Ii-AirPods eziphezulu ilahlekile ngesicelo sokuFumana, njengakwii-AirTag ezintsha. Ukuba ulahlekile, ii-AirPods zakho ziya kuthumela indawo yazo ngeBluetooth ezinokufunyanwa zezinye izixhobo zeApple. Ungasebenzisa i-app ye-Ndifumane ukwenza ukuba badlale isandi okanye basebenzise umbono osondeleyo ukuze bazi xa usondele ekuzifumaneni. Fumana i-app yam iya kukwazisa ngoku ukuba ushiye ngempazamo ii-AirPod zakho ngasemva.
I-Apple ikwazisa nenkxaso yeaudio yendawo TVOS ukuze ube nakho ukuva isandi esingqonge i-AirPods Pro yakho okanye ii-AirPods Max kwigumbi lakho lokuhlala ngaphandle kokuphazamisa omnye umntu. Inkxaso yeaudiyo yendawo yeAirPods nayo iza kwiMacOS yeeMacs ezitsha ezisekwe kwiprosesa M1. Indawo yeaudio nayo iza kwiApple Music kunye neapp yeTimeTime.
Ngokucacileyo, ukonwabela zonke ezi zinto, zombini ii-AirPods kunye nezixhobo ezihambelanayo ezisasaza umculo ofuna ukumamela kufuneka zihlaziyiwe. Ukuba ukhona umphuhlisi, ngoku unokukhuphela ii-betas zokuqala. Ukuba awukho, kuya kufuneka ulinde de kube yinyanga kaJulayi ukuze ube nakho ukuvavanya ii-betas zokuqala zikawonke-wonke. Kwaye ukuba awunamonde kangako, kuya kufuneka ulinde iinguqulelo ezisemthethweni zabo bonke abasebenzisi abaza kuphehlelelwa yiApple kwihlobo elidlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-firmware yee-AirPods nayo iya kuba neendaba